ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ဆောင်ပေးမယ် - ချစ်စရာအားလပ်ရက်လက်ဆောင်ပေးမယ်စိတ်ကူး
Bbq Meatball Subs သည်အပြီးသတ်ပျော်ပွဲစားဖြစ်သည်
The Big ဂိမ်း
ခွံနှင့်ဒိန်ခဲ (Bacon & Peas နှင့်အတူ)
ရွေ့လျားခြင်းဆိုတာဘဝမှာပျော်စရာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဖွဲ့စည်းထားသောလူအများစုအတွက်ပင်လျှင်နေထိုင်ရာတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့အောင်မြင်စွာကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းဟာဟာကူလီယန်အားထုတ်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါထုပ်ပိုး, ရုတ်သိမ်း, schlepping, အဖြည်, အခြေချ, စည်းရုံးရေး ... သင်ရုံစဉ်းစားကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်! ဒါကြောင့်သင်၏မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းအသစ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားဘုရင်အိပ်ရာထဲဝင်လာတာကိုမကူညီနိုင်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာသင်ဖုန်မှုန့်တွေကျပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသင်စွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
အသေးစားဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာ (ချိတ်များ၊ ချိတ်ဆွဲထားခြင်း၊ လက်သည်းများပြီးခြင်း)
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကဒီဟာကခုန်ပေါက်ထွက်လာတဲ့အရာပဲ၊ သင်အသုံးဝင်မယ့်အရာတစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းဖို့သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားနိုင်ပါတယ်၊ ငါတို့သည်သင်အမှန်တကယ် ecstatic တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကြီးမားသော ol '' ပွေ့ဖက်ရလိမ့်မယ်အာမခံ!
ဓာတ်ပုံများ Molly Lo ဓါတ်ပုံ ရှေ့ဆောင်မိန်းမအတွက်။
ယနေ့ည Zucchini Pesto ဖြင့် Pasta ကိုသုံးကြည့်ပါ
ငါ Salmonella စစ်တိုက်ကြ၏။ ထိုအခါငါအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Buttery လှော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် Quinoa
လျင်မြန်စွာ Pickles နှင့်အတူ Ham Sandwich က
cream နဲ့ heavy whipping cream ကွာခြားချက်
ကြက်ခေါက်ဆွဲပြုတ် စာရွက် ရှေ့ဆောင် အမျိုးသမီး
မြက်ခင်းပြင်ပေါ်က အိမ်ငယ်လေးကို ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ
ကျေးဇူးတော်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်အနီးရှိ အရက်ဆိုင်ဖွင့်သည်။